News Collection: समिलंगी आनिबानीले निर्देशक दंग !
समिलंगी आनिबानीले निर्देशक दंग !
लेस्बियन हुनु र देखिनु र फरक कुरा हुन् यद्यपी निशा अधिकारी र दिया मास्केले आफूलाई यो भूमिकामा खरो उतारेका छन् । ड्रेसअप, लुक्स र आनीबानीमा समेत काटीकुटी समिलंगी बनेका यी दुइ सुन्दरीको प्रशसा गरेर 'हिउँका फूलहरु' निर्देशक सुवर्ण थापा थाकेका छैनन् । लेस्बियन बनेका यी दुई अभिनेत्रीको अभिनय उनलाई यति मनपर्‍यो कि श्रृङ्खलाबद्ध रिटेकको आवश्यक नै परेन ।
'अभिनय हेर्दा त उनीहरु वास्तविक लेस्बियन जस्तै हुन कि जस्तो पो लाग्यो' शुक्रबार सुटिङबाट ब्रेक लिएका फ्रान्सेली आप्रवासी नेपाली निर्देशकले भने 'हामीले वर्कसपमा जसरी सिकाएका थियौं । त्यो कुरा प्रष्टरुपमा अभिनयमा देखापरेको छ । उनीहरु पात्रको जीवनको नजिक पुगेका छन् ।' अभिनयका लागि निशाले कपाल छोटाएर लेस्बियन लुक्स दिएकी छिन् ।
'मैले पात्रका लागि जुन व्यक्तिहरु छनौट गरेका थिएँ उनीहरुबाट म सन्तुष्ट छु' थापाले भने 'आवश्यकताले इच्छालाई जन्म दिन्छ भनेजस्तै मानव सभ्यताको धेरै पुरानो संवेदनालाई चित्रण गर्न निशा र दिया सक्षम भैरहेका छन् ।' नेपाली तेस्रोलिँगीहरुको संस्था ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले पनि चलचित्र निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने बचन दिएपछि निर्देशकको खुशि चुलिएको छ । स्वयम सोसाइटी अध्यक्ष तथा सभासद सुनिलबाबु पन्त डेलिगेटरको भूमिकामा अभिनय गर्दैछन् ।